မြင့်မားသောကြိမ်နှုန်း PCB - KingSong PCB နည်းပညာ, Ltd
မြင့်မားသောကြိမ်နှုန်း PCB can meet faster signal flow rates whenaspecial signal requirement into electronic components and products. It offers frequency from 500MHz to 2GHz, making it suited for high speed designs, as well as radio frequency, microwave and mobile applications. This high transmission frequency could provideafaster signal flow rate which is necessary for electronic devices with high frequency like wireless network, satellite communication.
ကွဲပြားခြားနားသော parameters တွေကိုပေါ်တွင်မူတည်သည်မြင့်မားသောကြိမ်နှုန်းအချက်ပြမှုများ PCB ဒီဇိုင်းကိုအပေါ်ရောင်ပြန်ဟပ်နေကြတယ်ပုံမှန်အားဖြင့် impedance ပေးပို့အစိတ်အပိုင်းမှလေးစားမှုနှင့်အတူကွဲပြားခြားနားသည်ကိုဆိုလိုသည်။ ထိုကဲ့သို့သော capacitive သက်ရောက်မှုကိုတားဆီးအပေါင်းတို့နှင့် parameters တွေကိုအတိအကျသတ်မှတ်ထားသောသေချာစေရန်, အထူးပစ္စည်းများနှင့်မြင့်မားသောအဆင့်ဖြစ်စဉ်ကိုထိန်းချုပ်လိုအပ်သည်
မြင့်မားသောကြိမ်နှုန်း PCB features တွေ:
Dielectric စဉ်ဆက်မပြတ် (DK ε, ဧရ) တန်ဖိုးကိုအသေးစားနှင့်တည်ငြိမ်ရောက်ထားရန်လိုအပ်ပါတယ်မြင့်မား DK signal ကိုထုတ်လွှင့်နှောင့်နှေးစေလိမ့်မည်။
လွန်ကျူးအချက် (DF, tgδ) တန်ဖိုးကိုက signal ကိုဂီယာ၏အရည်အသွေးထိခိုက်စေပါလိမ့်မယ်အဖြစ်သေးငယ် DF သေချာသေးငယ် signal ကို, လေလွလုပ်နိုင်ကြောင်း, အသေးစားဖြစ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
အိမ်ခြံမြေ, သက်ရောက်မှုခံနိုင်ရည်, တွန်းလှန်ဓာတုဗေဒခုခံအပူ, ကောင်းသောဖြစ်ခုခံလိုအပ်ချက်ချွတ်လက်သည်း။
ရေစုပ်ယူသည့်အခါစိုစွတ်သောပတ်ဝန်းကျင်အတွက်, မြင့်သောရေစုပ်ယူမှု DK & DF အကျိုးသက်ရောက်စေပါလိမ့်မယ်အနိမ့်ရောက်ထားရန်လိုအပ်ပါတယ်။
ကျနော်တို့အမျိုးမျိုးသောထုတ်လုပ်မှုကိုထောကျပံ့ High-အကြိမ်ရေ PCB from prototypes to production run in order to meet increasing demands of high-frequency PCB ,microwave PCB & RF PCB of our customers, include many of good performance high frequency PCB ,such as ရော်ဂျာ PCB, Ceramic PCB, Teflon PCB, Taconic PCB, Arlon PCB.